200W 24VDC CV ကို Dali & 0-10V ယာဉ်မောင်း - တရုတ်ရှန်ဟိုင်း Euchips စက်မှုဇုန်
200W 24VDC CV ကို Dali & 0-10V
200W 24VDC CV ကို Dali & 0-10V ယာဉ်မောင်း
item အဘယ်သူမျှမ .: EUP200AD-1H24V-0
output လက်ရှိ VAC: 8.3A
output ဗို့အား VAC: 24VDC
output ပါဝါ W: 200
: Mode ကိုမှိန် DALI/Touch DIM/1-10V/Adjustable resistance /PWM
Size ကိုမီလီမီတာ: 310 * 60 * 45
EUP200AD-1H24V-0 isaconstant voltage mode output LED driver. This driver complies with DALI standard protocol IEC 62386,ခြင်းနှင့် provides multiple dimming function (DALI,1-10V active signal ,PWM, adjustable resistance, and Touch DIM) to achieveasmooth dimming effect.
·လူပျိုရုပ်သံလိုင်းစဉ်ဆက်မပြတ်ဗို့အား output ကို
·အလင်းရောင်မှိန်ခြင်း mode ကို (Dali / 1-10V တက်ကြွ signal ကို / ချိန်ညှိခုခံ / PWM / Touch ကို Dim) အမျိုးမျိုးကိုပံ့ပိုး
input ကိုဗို့အား 220VAC ~ 240VAC ၏·အမြင့်အကွာအဝေး
· Built-in တက်ကြွ PFC function ကို
·ထိုကဲ့သို့သောဒါအပေါ် LED strips တွေ, အစက်အပြောက်အလင်း, မြို့ရိုးကိုအဝတ်လျှော်, သောမိုးလုံလေလုံ LED မီးအလင်းရောင်လျှောက်လွှာများအတွက်သင့်တော်
input ထိရောက်မှု >92%@230VAC,Full load
Power က Factor ≥0.95@115VAC,Full load
Inrush Current(max) အေးက start, 27A (twidth = 650us 50% Ipeak မှာတိုင်းတာ) @ 230VAC
R & N က (မက်စ်) 400mVp-p
ဗို့အားတိကျပြတ်သားမှု ± 3%
လုပ်ဆောင်ချက် Dimming Type Dali / Touch ကို Dim / 1-10V / Adjustments ခုခံ / PWM
Range အလင်းရောင်မှိန်ခြင်း 0.1%-100% Dimming to off
ကာကွယ်မှု ဗို့အားကျော် က output ကိုပိတ်ပါ, အမှားအခွအေနေ 10s များအတွက်ဖယ်ရှားနေသည်ကတည်းက recover လုပ်ဖို့ပြန်လည်စတင်ရန်
အပူချိန်ကျော် က output ကိုပိတ်ပါ, အမှားအခွအေနေ 10s များအတွက်ဖယ်ရှားနေသည်ကတည်းက recover လုပ်ဖို့ပြန်လည်စတင်ရန်
က short တိုက်နယ် အမှားအခွအေနေဖယ်ရှားပြီးနောက်ကြို့ထိုး, ပြန်လည်သက်သာ
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး & EMC ဒီရေလှိုင်း L-N:1KV
အခြားသူများက အလုပ်လုပ် Temp ။ -20℃~50℃
ယခင်: 20A * 8ch Relay Switch-Controller
နောက်တစ်ခု: 20W 350/500/550/700mA*1ch CC DALI&0-10V Driver